डब्ल्यूएचओले यो औषधि प्रयोगमा किन प्रतिबन्ध लगायो ? - Aarthiknews
डब्ल्यूएचओले यो औषधि प्रयोगमा किन प्रतिबन्ध लगायो ?
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसको उपचारमा प्रयोग गरिएको औषधि रेमडेसिभिरलाई शुरुमा धेरै प्रभावकारी ठानिन्थ्यो । तर, अहिले यो औषधि कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरूमा प्रभावकारी छैन । अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि गिलियड विज्ञानको यो औषधिमा आपत्ति जनाएको छ र यसको प्रयोग नगर्न सल्लाह दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञ प्यानलले मेडिकल पत्रिका बीएमजेलाई भने, “अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि उपचार प्रणालीले बिरामीहरूलाई सुधार गर्ने कुनै प्रमाण छैन।“ डब्ल्यूएचओको विश्वव्यापी परीक्षण नतिजा बाहिर आएपछि विशेषज्ञ प्यानलले यी सिफारिसहरू गरेको हो ।
एकता परीक्षणको नतीजामा यो औषधीले मृत्यु हुने संख्या घटाउन असफल भएको रिपोर्ट आएको छ । विशेषज्ञ प्यानलले तीन अन्य परीक्षणहरूको डाटा पनि समीक्षा गरेको छ । प्यानलका अनुसार यो औषधिले बिरामीहरुलाई कुनै खास प्रभाव पारेको छैन। संयुक्त परीक्षणको नतीजा अक्टुबर महिनामा प्रकाशित भएको थियो ।
पहिला डब्ल्यूएचओले नै यो औषधि कोरोना विरामीका लागि प्रभावकारी भएको भन्दै प्रयो्ग गर्न भनेको थियो । तर, अहिले आफैले प्रयोग नगर्न भनेपछि औषधि उत्पादक र प्रयोगकर्ता चकित परेका छन् ।
गिलियड साइंसेजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ’धेरै अध्ययनमा यो कुरा पत्ता लागेको छ कि औषधि रेमडेसिभिर औषधि कोरोना भाइरसको बिरूद्ध काम गर्दछ र बिरामीको रिकभरि समय घटाउँछ।’
गिलियड साइंसेजले भन्यो, ’हामी निराश छौं डब्ल्यूएचओका दिशानिर्देशहरूले यस्तो प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दछ जब विश्वभरि कोरोनाका घटनाहरू बढ्दो छ र डाक्टरहरू पहिलो चोटि एन्टिवाइरल उपचारको रूपमा रेमडेसिभिर औषधिमा भर परिरहेका थिए ।